Nai Nai: Virus မ၀င်အောင်ကာကွယ်ကြမယ်...
အကယ်၍ သင့် Antivirus ရဲ့ Virus definition တွေဟာ ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ကျော်သွားပြီး ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Virus Scanner ဟာ အသုံးမ၀င်တော့ပါဘူး... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အသစ်ထွက်တဲ့ Virus တွေကို detected မဖြစ်ပဲ ၀င်ခွင့်ပြုနေသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်...သင့်ရဲ့ ဖိုင်တွေကို remove လုပ်ဖို့၊ exit လုပ်ဖို့နဲ့ emails အမြောက်အမြားပို့ဖို့ အတွက် အလားအလာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်... free antivirus program တွေမှာဆိုရင် အများအားဖြင့် တစ်လ တခါပဲ update ပေးပါတယ်... အဲလိုမျိုး software တွေကို ဘယ်တော့မှ မသုံးမပြုသင့်ပါဘူ:..
နောက်တစ်ခုက အသစ်ထွက်လာတဲ့ Virus တွေပြန့်နှံ့နေတဲ့ အချိန်နဲ့ အဲဒီ Virus တွေရဲ့ Virus definition တွေကို update ပေးတဲ့ အချိန် ( ဆိုလိုတာကတော့ update ကို သင်ရရှိတဲ့အချိန် ) ဟာ အမြဲလိုလိုပဲ နာရီပေါင်းများစွာ ကွာခြားနေတတ်ပါတယ်... အကယ်၍ သင့်ရဲ့ ISP ( Internet Service Provider ) က email တွေကို filter လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်တောင် Virus အသစ်တွေကိုတော့ သင်ရရှိနေအုံးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
Virus တွေဟာ တစ်ခါတရံမှာ သင့်ရဲ့ Antivirus Software ကို disable လုပ်နိုင်ကြပါတယ်... Popular ဖြစ်နေတဲ့ Antivirus Program တွေကို သုံးမယ်ဆိုရင် Virus တွေက အဲဒီ Program ကို သိပြီး terminate လုပ်ပါလိမ့်မယ်...သင့်ရဲ့ ISP က Virus protection လုပ်ပေးနေသည့်တိုင်အောင် Virus အကုန်လုံးကိုတော့ ရပ်သွားအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
အရေးကြီးတာကတော့ Email Attachment တွေ မဖွင့်ခင် (သို့) Website ( or porn site) တစ်ခုကနေ Software တွေကို download မလုပ်ခင်မှာ သင့် browser ရဲ့ disk cache ကိုဖယ်ရှားပေးဖို့လိုပါတယ်... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Website တွေ့ရဲ့ Viruses scan အများစုဟာ Email address ရဖို့အတွက် သင့်ဆီကို ရောက်လာတတ်ပါတယ်...
လူသုံးအရမ်းများတဲ့ web browser တွေ၊ လူသုံးများတဲ့ word processor ( သို့ ) Windows Address Book တွေကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး.. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Netsky virus ကို ဥပမာ တစ်ခုအနေနဲ့ ကြည့် ကြည့်ပါ။ ၄င်း Virus က သင့်ရဲ့ Computer ကို Email address တွေ ရဖို့အတွက် scan တွေဖတ်ပါတယ်...ဖိုင် အကုန်လုံးကို scan ဖတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး.. အောက်ပါ ဖိုင် types တွေကို scan ဖတ်ပါတယ်...
U.S government's Computer Emergency Rediness Team ( US-CERT) ကနေ Microsoft's Internet Explorer ( IE ) broswer အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ဖို့သတိပေးထားပါတယ်.. Vulnerability Note မှာကြည့်ပါ...
Extensions တွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ...အဲဒီ extensions တွေ ပါဝင်တဲ့ ဘယ် attachment မဆို virus လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်...
ကိုယ်နဲ့ မသိတဲ့သူတွေဆီက mail တွေကို ဖွင့်မဖတ်မိအောင် သတိထားဖို့လွယ်ပေမယ့် တခါတရံ ကိုယ်နဲ့ သိတဲ့သူတွေဆီက virus ပါတဲ့ mail တွေကို သတိမပြုပဲဖွင့်တတ်ကြပါတယ်... အောက်မှာပြထားတဲ့ အချက် (၄) ချက်ကြောင့် သင်နဲ့ သိတဲ့သူတွေရဲ့ နာမည်နဲ့ virus ပါတဲ့ Mail တွေရောက်လာနိုင်ပါတယ်....
သူတို့ရဲ့ Computer မှာ ရှိတဲ့ Software တွေကနေ သူတို့မသိလိုက်ခင်မှာ သူတို့ ကိုယ်စား email တွေပို့နိုင်ပါတယ်။ Software တွေက တခြားတစ်ယောက်ဆီကနေ သူတို့ရဲ့ E-mail address တွေကို ယူပြီး ပို့လိုက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး Message headers ကိုလည်း သတိထားရပါမယ်... ဒါပေမယ့် တခါတရံမှာတော့ information အတုအယောင်တွေလည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ... အများအားဖြင့်တော့ delivery route တွေက ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်...။
Posted 11:15 AM by Nai Nai in Labels: Virus များအကြောင်း
0 comment(s) to... “Virus မ၀င်အောင်ကာကွယ်ကြမယ်...”